Feedhyahanka Muslimka Ah Ee Khabib Oo Daboolka Ka Qaaday Sababta Aanu Ula Dagaallami Doonin Tony Ferguson – Cadalool.com
Feedhyahanka Muslimka Ah Ee Khabib Oo Daboolka Ka Qaaday Sababta Aanu Ula Dagaallami Doonin Tony Ferguson
Feedhyahanka Muslimka ah ee Khabib Nurmagomedov ayaa doonaya inuu kusoo laabanayo xayndaabka dagaalka, laakiin markan kuma tartami doono xirfaddiisa laagga, legdinta iyo feedhka iskugu jirta, wuxuuse u xuub-siibanayaa dhinaca feedhka oo kaliya.
Khabib oo bishii November si xun u karbaashay Conor McGregor oo uu dhulka dhigtay wareeggii afraad, kuna qasbay inuu garsooraha gargaar degdeg ah weydiisto, ayaa waxa uu helay dalab uga yimid Tony Ferguson oo ah nin Maraykan ah oo ciyaara MMA, isla markaana ay isku xirfad yihiin Khabib, laakiin tababaraha feedhyahanka Muslimka ah oo lagu magacaabo Ali Abdelaziz ayaa gaashaanka ku dhuftay dalabkaas, waxaanay u sheegeen in waqtigan aanu Khabib diyaar u ahayn kulan noocaas ah.
Ali waxa uu sheegay inay doonayaan feedh lacag badan lagu helayo, xilligana aanay diyaar u ahayn inay isku khasaariyaan kulan hoose oo aanay wax badan kasoo gelaynin.
“Waxa aanu dooneynaa dagaal aanu lacag badan ka samaynayno. Feedh iyo MMA midka uu doono ha noqdo. Anigu waan jecelahay Tony Ferguson, laakiin maaha mid lacagtaas samaynaya, waana taas midda aan idiin sheegayo. Boqolkiiba boqol, Tony Ferguson maaha dagaalka xiga, waayo waxa aan u baahanahay mid wax iibinaya.” Sidaas waxa yidhi Ali Abdelaziz oo ah tababaraha Khabib.
Taageere la socday xaaladda feedhyahanka, ayaa Khabib barta Intagram ka weydiiyey su’aal ahayd inuu caddeeyo hadalka uu tababarihiisu sheegay iyo inuu feedhkaas geli doono.
“Khabib tababarahaagu wuxuu sheegay in aanad xiisaynaynin inaad la dagaallanto Tony, sababtoo ah maaha dagaal lacag samaynaya. Walaal, miyaanad xasuusanin inaad tahay wiilkii yidhi halkan waxaan u imid inaan ka tago dhaxal iyo taariikh ee lacag umaan iman?” Sidaas ayuu taageerahaasi usoo dhigay su’aasha uu weydiiyey Khabib, laakiin waxa uu markiiba helay jawaab uga timid Khabib, waxaanu ku yidhi: “Magaca tababarahaygu waa Ali, anigana magacayygu waa Khabib. Haku khalkhalin.”
Jawaabta Khabib ayaa waxa loo fahmay inay ka dhigan tahay in isaga aanay ka imanin go’aanka ah inuu galo dagaal lacag badan lagu helayo, laakiin uu ku taagan yahay ballantiisii hore ee ahayd inuu sumcad kaga tago dunida.